1 JỌN 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1JỌ 1)
Ihe anyị na-edere unu banyere ya bụ ihe ahụ na-adịrị ndụ site na mmalite, nke anyị nụrụ banyere ya, nke anyị jikwa anya anyị hụ, na nke aka anyị metụrụ. Anyị na-ekwu ihe banyere Okwu nke ndụ ahụ.
Mgbe e mere ka mmadụ nile hụ ndụ ahụ anya, anyị sokwa hụ ya. Ya mere, ihe anyị na-ekwu okwu ya, na ihe anyị na-akọrọ unu bụ banyere ndụ ebighị ebi ahụ nke ya na Nna nọ na mbụ, nke e mere ka ọ pụta ìhè nye anyị.
Anyị na-ekwusa banyere ihe ahụ anyị hụrụ, na nke anyị nụrụ, nꞌihi na anyị chọrọ ka unu soro anyị nwee nnwekọ, bụ nnwekọ ahụ anyị na Nna na Ọkpara ya nwekọrọ.
Anyị na-edere unu ihe ndị a nꞌihi ime ka ọṅụ anyị zuo oke.
Ma ọ bụrụ na anyị na-ebi ndụ anyị nꞌihè, dị ka ya onwe ya si nọọ nꞌihè na-ebi ndụ ya, mgbe ahụ anyị na ibe anyị ga-enwe ezi nnwekọ. Jisọs Ọkpara Chineke ga-asachapụkwa anyị site na mmehie anyị nile.
Ma ọ bụrụ na anyị asị na anyị adịghị eme mmehie, anyị na-eme onwe anyị ndị nzuzu. Anyị na-ajụkwa ịnabata eziokwu ahụ Chineke na-ekwu banyere ndụ anyị.
Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emeghị mmehie ọ bụla, anyị na-akpọ Chineke onye na-ekwu okwu ụgha, okwu ya enwekwaghị ọnọdụ nꞌime anyị.
1 JỌN 1:1
1 JỌN 1:2
1 JỌN 1:3
1 JỌN 1:4
1 JỌN 1:8
1 JỌN 1:10
1 JỌN 1 / 1JỌ 1
1 JỌN 2 / 1JỌ 2
1 JỌN 3 / 1JỌ 3
1 JỌN 4 / 1JỌ 4
1 JỌN 5 / 1JỌ 5